U badal fiidiyowga MP4-ka DVD-ga DVD-ga iyo DVD-ga loo beddelo MP4 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Dad badan oo adeegsadayaal ah intii u dhaxeysay sanadihii 2000 iyo 2009 waxay soo diyaariyeen tiro aad u badan oo ah DVD-yada filimka ganacsiga ah ama cajaladaha guryaha lagu sameeyo, kuwaasoo si raaxo leh loogu arki karo iyagoo sariirtiisa ku fadhiya laacib gaar ah. Sannadaha soo socda, adeegsiga baahsan ee adeegyada qulqulka iyo barxadaha la qaadan karo ayaa si weyn hoos ugu dhigay dhaqankan, taasoo horseed u ah DVD-yada DVD-ka ku ururiya boodhka khaanadaha qaarkood.
Hadaan rabno keydi fiidiyowyada kujira DVD faylka dhijitaalka ah ama kan kale (keen MP4-ka DVD-ga), tilmaamahan waxaan ku tusi doonaa dhammaan barnaamijyada bilaashka ah ee loogu talagalay baahiyahan, si aad awood ugu yeelato inaad xakamayso ugu badnaan waxyaabaha ku jira saxannada indhaha iyo waxa la hayo iyo wixii la tuurayo.
AKHRISO: Sidee u beddel fiidiyowga iyo DVD-ga MP4 ama MKV kombuyuutarka iyo Mac
Sida loo Beddelaan DVD Videos in MP4 (iyo ku xigeenka Versa)
Cutubyada soo socda waxaan ku tusi doonaa barnaamijyada bilaashka ah ee aan u adeegsan karno kombiyuutarkeena si aan ugu beddelno DVD-yada fiidiyowyada fiidiyowga ah ee loo yaqaan 'MP4 Video files' iyo wixii la mid ah (ka dibna u samee DVD DVD mid ama in ka badan MP4). Dhammaan barnaamijyada waxaa loo isticmaali karaa iyada oo aan la xadidin ama aan la xadidin cabirka feylasha ama DVD-ga la sameynayo, si aan nafteenna uga badbaadinno iibsashada barnaamijyo qaali ah oo hadda duugoobay.
Barnaamijyada loogu badalayo DVD-ga MP4
Barnaamijka ugu horreeya ee aan kugula talineyno isku dayga loogu beddelayo DVD-ga dijitaalka ah waa gacan-jab.
Si aan u isticmaalno barnaamijka, waxaan marka hore DVD-ga ku dhejineynaa ciyaaryahanka, sug 2 daqiiqo, ka dib bilow barnaamijka oo waxaan doorannaa DVD-ga DVD-ga lagu rakibayo fiidiyowga.
Marka fiidiyowga la galiyo is-dhexgalka, waxaan hubinnaa fiidiyowga iyo maqalka maqalka si loo ilaaliyo, waxaan doorannaa sida Foomka qaabka MP4, waxaan dhiseynaa sida Hore codka 576p25 ka dib ayaan kor u riixnaa Bilow koodh.
Bedel ahaan ansax ah HandBrake waxaan u isticmaali karnaa barnaamijka VidCoder.
Marka la eego interface fudud waxaan ku shubi karnaa waxa ku jira DVD Video kasta, dooro midka maqalka iyo fiidiyaha ah ee la ilaalinayo, dooro haddii la isku daro cinwaanada hoose, la doorto astaanta beddelka (ee Dejinta habayntas) ugu dambayntiina u beddela diskiga faylka MP4 adoo riixaya Isbedel.
Haddii halkii faylasha MP4 ah aan dooneyno inaan ku keydinno DVD-ga DVD-ga MKV (qaab cusub oo la jaan qaada Smart TV), waxaan isticmaali karnaa qalab bilaash ah oo hufan sida MakeMKV.
Barnaamijka ugu fudud ee la isticmaali karo si loogu badalo DVD-ga fiidiyowga fiidiyowga ah ee dijitaalka ah ma jiro: si aan u isticmaalno waxaan u fureynaa barnaamijka, ka xulo muuqaalka muuqaalka ah ee fiidiyowga laga qaadayo, dooro wadiiqooyinka lagu keydiyo, dooro waddo lagu keydiyo feylka cusub ka dibna riix Samee MKV inuu sababo isbadal.
Haddii aad tahay qof bilow ah oo aadan isticmaali karin HandBrake iyo VidCoder, kani waa barnaamij adiga kuu ah!
Beddelaan DVD-ga la ilaaliyo
Haddii aan isku dayno inaan adeegsanno labada barnaamij ee ugu horreeya ee kor laguugula taliyay DVD-ga la ilaaliyo, ma awoodi doonno inaan u beddelno MP4, waa la arkay ilaalinta anti-nuqul ee lagu dhisay warbaahinta asalka ah ee suuqa. Midka kaliya ee leh nidaam ka saaraya ilaalinta waa MakeMKV, laakiin taa bedelkeeda waxaan sidoo kale isticmaali karnaa mid ka mid ah barnaamijyada aad ku aragto hageheena Barnaamijyada ugufiican ee nuqul DVD (rip) kumbuyuutarka ah.
MAALIN: ka saarida ilaalinta si loo sameeyo nuqullo shaqsiyeed ma ahan dambi, waxa muhiimka ah ayaa ah in nuqulada aysan waligood ka bixin gurigayaga (ma qaybin karno mana iibin karno).
Barnaamijyada loogu badalo MP4 in DVD
Haddii, dhinaca kale, aan u baahanahay barnaamij aan ku keenno MP4-ka DVD-ga DVD-ga (sidaa darteed la jaan qaadaya DVD-yada desktop-ka), waxaan kugula talineynaa inaad isku daydo Freemake Video Converter isla markaaba.
Si aad u isticmaasho, geli DVD madhan duubista, bilow barnaamijka, riix batoonka. video midigta kore, xulo faylasha MP4 si aad u badasho, riix batoonka gudaha DVD soo bandhig halkan hoose ugu dambayntiina xaqiiji Gubasho. Daaqad isku mid ah ayaan ka dooran karnaa in la abuuro menu DVD ah iyo tayada beddelaadda, xitaa haddii xuduudaha aasaasiga ahi ay ka badan yihiin intii lagu samayn lahaa fiidiyowyada DVD wanaagsan.
Barnaamij kale oo aad ufiican oo loogu badalo MP4-ka DVD-ga waa AVStoDVD.
Barnaamijkan waxaan si deg deg ah ugu rogi karnaa fiidiyowyada MP4 qaab u dhigma DVD Video, si aan isla markiiba u gubno qalabka indhaha. Si aad ugu darto fiidiyowyada, guji kaliya Furan, halka aan ka bilaabayno hawsha beddelka waxaan riixnaa badhanka bilow.
Haddii aad raadinayso barnaamij dhammaystiran oo muuqaal leh oo hodan ah si aad MP4 ugu keento DVD, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad isku daydo DVD Author Plus.
Iyada oo ay tahay, waxaad isla markiiba ku shuban kartaa dhammaan faylasha MP4-ka geedka galka ku dhex jira adigoon furin maareeyaha faylka markasta si aad u dhammaystirto kama dambaysta abuurista muuqaalka. Marka kuweena Xaraash Hoos ka muuqata waa dhameystiran tahay, deji xuduudaha DVD-ga qeybta saxda ah ee daaqadda, ku dhufo Next xagga sare, oo dhammee howlaha gubashada.
Si aad u hesho barnaamijyo kale oo faa'iido leh oo loogu beddelo MP4-ka DVD-ga, akhri kuwayaga hage loogu talagalay u beddelo MKV-ka AVI ama u gubo MKV DVD.
Barnaamijyada kor ku xusan waxaan awoodi doonnaa inaan ku fulino dhamaan noocyada kala badalashada MP4 ilaa DVD iyo DVD-ka ilaa MP4, si loo badbaadiyo cajaladaha muraayadaha indhaha ee filimada naga xiran iyo kuwa jeexjeexa isla markaasna loo sameeyo DVD-yo si loo siiyo eheladeena waayeelka ah ama la haysto. oo ka mid ah ciyaartoydii hore ee DVD-du wali way shaqeeyaan.
Tilmaame kale waxaan ku tusnay barnaamijyo kale u beddel DVD-ga MP4 si aad u daawato fiidiyowyada ku jira iPhone-ka, si fiidiyowyada (laga bilaabo DVD) ay ula jaan qaadayaan ciyaaryahanka ku dhex jira iPhone-ka.
Haddii taa bedelkeeda aan jeclaan lahayn inaan u beddelno fiidiyowyada si aan uga daawanno Android, waxaan kuu gudbin doonnaa hagahayaga U beddel filimada iyo fiidiyowyada si aad ugu daawato taleefannada casriga ah.